INTEE IN LA KARINAYO HADHUUDHKII KU YIILAY DIGSI DIGSI IYO IYADA OO AAN LAHAYN COB: SAACAD INTEE LE'EG AYAY QAADATAA, CUNTADA SIDA GURIGA IYO SIFOOYINKA KHUDRADDA - KHUDRADDA
Corn waa la kala soocaa tiro ka mid ah qaababka noolaha. Waxaa habboon in la ogaado in tani ay tahay warshad kuleyl ah. Cagaarka abuurka wuxuu ku dhacaa heerkul ah 7-8 digrii. Bararka ayaa u baahan 40% oo biyo ah miisaanka hadhuudhka. Haddii dhammaan xaaladahaas la buuxiyo, geedo waxaa la sameeyaa 5-6 maalmood.
Sida ugu dhakhsaha badan hadhuudh uu leeyahay 3-4 caleemo, waxaa suurtagal ah in la arko joogitaanka heerka koowaad ee xididdada nodal. Iyada oo ay sameysmaan halbeegyo cusub oo caleemo ah, waxaa la sameeyay qaab cusub oo xididada nodal ah. Marka sii kordhaya ciidda madow, nidaamka xididka waxay gaareen qoto dheer oo ah 3-4 m, iyo dhinacyada dhinacyada, xididdada u koraan ilaa 120-150 cm.
Marxaladda ugu horreysa ee xilliga sii kordhaya, hadhuudhka waxaa lagu gartaa koritaanka gaaban waxayna u baahan tahay iftiin dheeri ah. Waqtigaan, marinka koritaanka dhirta, dhammaan xubnaha mustaqbalka ayaa la dhigay, taas oo ka dhalatay taas oo ah hadhuudhku wuxuu ka cabsanayaa inuu kufaraxo 3-4 asbuuc ee hore. Haddii ay u baxdo haramaha inta lagu jiro muddadan, ka dibna muddo gaaban beergooyska ayaa si weyn hoos ugu dhacaya.
Heerkulka ugu yar ee abuuritaanka geedo, caleemaha iyo jirriduhu waxay ku jiraan 10 digrii. Xilliga qaboobaha ilaa 2-3 digrimood ayaa si fiican u dulqaadan kara, laakiin dayrta 3 digrii waxay saameyn xun ku yeelan kartaa iyaga.
Hadal la kariyey ma aha oo kaliya dhadhan fiican, oo buuxa, laakiin sidoo kale faa'iido leh. Saabashadani waxay noqon kartaa cunto fudud, saxan dhinaca, ama xitaa cunto kala duwan. Marka lagu daro dhadhanka aan lakulmayn, siriyadu aad bay muhiim u tahay jirka. Halabuurka wuxuu ka kooban yahay dhammaanba lagama maarmaanka u ah hawlgalka buuxa ee fitamiinada jirka bani'aadamka iyo walxaha raadraaca:
fitamiin B, C, D, K, PP;
Noocyada dalagyada hadhuudhka ah ee awood u leh inay nadiifiyaan jirka sunta iyo ka saaraan kolestaroolka.
Digniin! Iyada oo si joogto ah loo isticmaalo khudaarta caadiga ah ee nidaamka dheef-shiidka jirka. Alaabta la kariyey ee tandem leh subagga waa daaweyn weyn oo caloosha.
Ka hor inta aanaan lagu darin hadhuudhka, waa muhiim in la doorto mid sax ah. Waa kuwan soo socda:
Soo iibso khudradda xilliga xiga (bilaha 7aad-8aad). Dooro kaliya dhegaha yar yar iyo kuwa cusub. In khudradda yar yar, waxay yihiin caan cad-cad ama huruud ah.
Beerka laga soo iibsaday waa inuu noqdaa mid casiir leh. Pips waa dhammaanba siman isku mid ah, adagtahay midba midka kale. Marka la cadaadiyo, waa inay sii daayaan dareeraha oo la mid ah caanaha.
Miro qallalan oo qasacadaysan kuma haboona cunnada. Marka la qalajiyey, sonkorta gudaha ee hadhuudhku waxay isu beddeshaa dareeraha, iyo khudradda lafteedu lumiso macaan iyo dhadhan.
U hubso inaad kormeerto caleemaha. Waa inay noqdaan kuwo dhalaalaya oo cagaar ah, oo cusub oo dherer leh. Xaaladdan, antennae waxoogaa qoyan.
Cuntada isku qurxinta ee hadhuudhka, dooro cobs oo isku mid ah cufnaanta isla cabbirka.
Ka hor inta aadan bilaabin cunto karinta, hadhuudh waa in la diyaariyaaIsticmaalka talooyinka soo socda:
Ka saar caleemaha ka sameysan cobs, iyaga ku dhaq biyo socda.
Ku qoy khudradda biyaha qabow muddo 1 saac ah.
Midho ka soo go'ay madaxa.
Daaji abuurka 4 saacadood, ka dibna ka dibna sii wad cuntada. Markaas waxay noqon doonaan jilicsan iyo casiir leh (sida loo kariyo hadhuudh si ay u tahay jilicsan oo casiir leh, akhriso maqaalkan).
Mid ka mid ah suxuunta ugu wanaagsan ee dadka waaweyn iyo carruurta labadaba waa la kariyey hadhuudh. Laakiin si ay khudradda this si ay u soo jiidan macaan oo casiir leh, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xeerarka qaar ka mid ah. Akhri qoraalladayada ku saabsan sida loo kariyo cobsiyada hadhuudhka ah ee dufan iyo midig, iyo sidoo kale inta uu le'eg yahay iyo sida loo karsado Bonduel kala duwan.
Sidee loo kariyaa guriga duufaan?
Waqti intee le'eg ayaan u baahanahay inaan ku karkariyo hadhuudhka dhexdiisa? Kani waa qaacidada caadiga ah adoo isticmaalaya cobs yar. Nidaamka:
Diyaarso dheriga. Ku dhaji jiritaanka hadhaaga hadhuudhka ah.
Ku shub biyo si uu u daboolo hadhuudhka 2-3 cm.
Isticmaal tuubo ka fiican oo leh hoose oo qaro si markaa alaabadu si siman u kulmaan.
Wixii dhadhan dheeraad ah, caleemo iyo stigmas jiif hoose ee taangiga.
Dheriga ku sii dari dabka, sug ilaa iyo inta biyuhu dhalayaan, milix (30 g), yaree dabka oo sug 10 daqiiqo. Waqtigaan waa ku filan hadhuudhka dhalinyarada si aad u karisid (xajmiga iyo waqtiga intee le'eg si aad u karisid hadhuudhkii khudradda ee digaagga, waxaad ka heli kartaa halkan).
Waxaad isku dayi kartaa miro yar si aad u dhadhamiso. Alaabta la dhammeeyey waa jilicsan oo casiir leh.
Iska tuur hilibka kulul ee shaandho, milix iyo meel saxan oo diyaarsan. Saxanka ayaa diyaar u ah inuu cuno.
Baro raashin badan oo loogu talagalay wax lagu kariyo hadhuudhka ku jira cobga cusbo halkan.
Lama oggola milix
Habka karinta, isticmaal milix kaliya ugu dambeeya, uma baahnid inaad ku darto digsiga, maaddaama ay hoos u dhigto geedi karinta, sidaas darteed, hadhuudhku waa la kariyaa waqti dheer. Nidaamka:
Ku rid weelka diyaarka ah ee weelka, ku shub isku dar ah caano leh biyo (1: 1), ku rid shooladda.
Sida ugu dhakhsaha badan ee ay u karkaraan, yareeyo kuleylka oo isku kari ilaa inta la kariyo daboolka.
Hubi diyaargarowga maadada, waxaad isticmaali kartaa fargeeto. Waa inay noqdaan jilicsan.
Ka dib karinta, ka daadi miro iyo ku rid xeedho. Iskuday ugu dambeyn oo ah subagga iyo dhirbaaxada.
Raashinka gaarka ah
Inta badan, hadhuudhka dhalinyarada waxaa lagu kariyaa digsi caanaha. Habkani waa mid aad qaali u ah marka la barbar dhigo midka kowaad, laakiin miro dhameeystiran waxay helayaan dhadhan khafiif ah iyo dareemo dhadhan oo cajiib ah.
Ku rid mashiinka hadhuudhka ee hore loogu talogalay digsi qaro weyn leh.
Ku dar caanaha kor ku xusan, si ay miraha u daboolaan 2-3 cm.
Salt uma baahna, dhig digsi kariyaha iyo kariimka kuleylka hooseeya ilaa 20 daqiiqo.
Iska tuur maqaarka dhamaystiran ee colon, ku dar sabdo iyo sug 3-5 daqiiqo si loogu nuugo. Daadi milix si aad u dhadhamiso.
Karkari hadhuudhka, adoo isticmaalaya qaacidada caadiga ah ee cusbada.
Ka saar weelka oo ku jiif saxanka.
Karkari 2 koob oo caano ah, ku dar galley. Diyaarso dabka kuna hay muddo 10 daqiiqo ah.
Ka hor dhamaadka karinta cuntada ku dar subagga subagga.
Saltida saxda ah ee isla markiiba ka hor intaadan isticmaalin.
Digniin! Ka hor inta aan laga saarin digsiga dabka, uma baahna in la degdego si looga saaro miraha. Ha u istaagaan oo quudiyaan dhadhanka milix-yar iyo macaan.
Sidee loo kaydiyaa khudradda la kariyey?
Waa in la ogaadaa in hadhuudh aan la kaydin waqti dheer, sidaas darteed waa in aadan diyaarin jiilaalka. Alaabta iibsatay waa in si degdeg ah loo xiraa. Laakiin horay loo kariyey alaabta la kariyey waa la diyaarin karaa horey iyo waqti isku mid ah ilaalin ay tayada iyo dhadhan ka hor isticmaalka.
Si aad u haysatid saxanka qaboojiyaha waa doorashada ugu habboon, laakiin aan ka badnayn 2 maalmood.. Iyo hadhuudhka welded leh saxan ku duuban filim foore ah. Ka sarreeya wakhtiga kaydinta loo cayimay maaha wax la jecelyahay, maaddaama hadhuudhku uu lumin doono dhadhankiisa iyo carafka.
Hadab la kariyey waa cunto macquul ah, iyo sidoo kale ilo badan oo fitamiino ah. Cunnada cunto kariska ee la soo bandhigay waxay kuu oggolaaneysaa inaad si dhaqso ah u kariso hadhuudhka, halka suufku ka soo baxayo delicious, udun iyo nafaqo leh. Waxaadna ku siin kartaa kalkaaliye iyo astaamo, haddii lagu daro walxaha kale.